Xildhibaano ku dhaawacmay Qarax goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho – Kalfadhi
Xildhibaano ku dhaawacmay Qarax goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho
May 22, 2019 May 22, 2019 Kalfadhi
Ku dhowaad 10 qof ayaa ku dhintay in kabadan tiradaasna dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii goordhow qarax Ismiidaamin ah uu ka dhacay bar Kontarool ah oo ay Ciidamada Nabad Sugidda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Boondheere ee Gobalka Banaadir.
Qaraxa oo ahaa gaari lagu so raray waxyaabaha qaraxa ayaa lala beegsaday gawaari feel ku jirtay oo ku sugnaa kontaroolka Godka Jilacow ee degmada Boondheere. Dadka dhintay waxaa ku jira Korneyl Faadumo Cali Raage (Korneyl Faay) iyo Ciidankii la socday. Sidoo kale waxaa halkaasi ku dhintay dad kale oo shacab ah iyo shaqaale dowladeed oo dhamaantood saf ugu jiray in ay maraan baaritaanka Ciidamada.
Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kamid ah dadka ay dhaawacyada soo gaareen. Xildhibaan Drs Maryan Cariif iyo Xildhibaan Nuur Shabeel ayaa la sheegay in ay dhaawacyo ka soo gaareen qaraxaasi.
Labada Xildhibaan Hudda Axmed Cali oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Kalfadhi u xaqiijisay in ay dhaawacyo fudud ay soo gaareen Maryan Cariif iyo Xildhibaan Shabeel kuwaas oo la geeyay Isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho.
Wixii warar ah oo ku soo kordha halkaan ayaa kala socon doontaan insha Allaah.
Golaha Shacabka oo kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho
Fadhigii Golaha shacabka baarlamanka Soomaaliya ee maanta oo u baaqday kooram la’aan